Mmachibido Na-efu Na My iPhone! Nke a bụ ebe ọ gara. - Iphone
ihuenyo iphone m ghọrọ oji na ọcha
otu esi emekọrịta iphone 6 na bluetooth ụgbọ ala
iphone 5s anaghị akwụ ụgwọ
iphone 6s agaghị ejikọ na wifi
otu esi akwụsị id id apụọ
Mmachibido Na-efu Na My iPhone! Nke a bụ ebe ọ gara.
Just danyere na iOS 12, mana ugbu a ị nweghị ike ịchọta Mmachibido. Echegbula, Mmachibido adịghị efu, ọ kpaliri ya! N’isiokwu a, aga m eme ya kọwaa ebe a kwagara Mmachibido na otu ị ga - esi jiri Oge Ige iji gbochie ihe mmadụ nwere ike ime ma ọ bụ enweghị ike ịme na iPhone gị !
Ebee ka iPhone Mmachibido?
Mgbe ị na-emelite iPhone gị na iOS 12, ị ga-ahụ na Ebugala Mmachibido na ngalaba Oge Ngosipụta na ngwa Ntọala. Nwere ike ịchọta oge ihuenyo site na imeghe Ntọala na ịme ọpịpị Oge Ihuenyo .
Ọ bụrụ na i mebeghị, pịa Gbanwuo Oge Ihuenyo na melite a Screen Time passcode. Na menu Oge Ihuenyo, ị ga-ahụ Ọdịnaya & Amachibidoro Nzuzo - ọ bụ ebe a kpaliri Mmachibido.
Gịnị Bụ Oge Ihuenyo?
Oge Ihuenyo bụ atụmatụ ọhụrụ ewepụtara na ntọhapụ nke iOS 12. Emebere ya iji nyere ndị ọrụ aka ijikwa oge ole ha lere anya na ihuenyo iPhone ha, na ụfọdụ, belata ihe ha nwere ike ịhụ. Nwere ike ịmụtakwu banyere Oge Ihuenyo na isiokwu anyị gbasara ọhụrụ iOS 12 atụmatụ !
Etu ị ga - esi melite ọdịnaya na iwu nzuzo
Iji melite Ọdịnaya & Nzuzo Nzuzo na iPhone gị, gaa Ntọala -> Oge ihuenyo wee pịa Ọdịnaya & Amachibidoro Nzuzo .
Nke mbụ, ị ga-edozi passcode ihuenyo oge. Nke a dị iche iche passcode na onye ị na-eji kpọghee gị iPhone. Mgbe ahụ, gbanye mgba ọkụ na-esote Ọdịnaya & Nzuzo n’elu ihuenyo.
Ugbu a agbanweela Afọ & Nzuzo, ị nwere ọtụtụ njikwa nke ihe enwere ike ịnweta ma ọ bụ enweghị ike ịnweta na iPhone gị. Nke a bụ mmebi nke atụmatụ ndị dị n'ime Mmetụta & Mmachibido Nzuzo:
iTunes & Storelọ Ahịa Storelọ Ahịa : Na-enye gị ohere ịgbanyụ ikike ịwụnye ngwa, ihichapụ ngwa, ma zụta n'ime ngwa.
Ngwa enyere : -Enye gị ohere gbanyụọ ụfọdụ wuru na-ngwa ọdịnala dị ka Safari, FaceTime, na obere akpa.
Mmachi ọdịnaya : Na-enye gị ohere igbochi nbudata nke egwu, ihe nkiri sịnịma, akwụkwọ, na ihe ngosi onyonyo dabere na ọkwa ha. I nwekwara ike iyo si doro anya na ebe nrụọrụ weebụ na ịgbanwe ụfọdụ nke gị Game Center ntọala.
Shakekọrịta Ọnọdụ : Na-enye gị ohere ịgbanyụ Share My Location, a atụmatụ na-akọrọ gị kpọmkwem ọnọdụ na ndị enyi na ezinụlọ na Ozi ngwa.
Nzuzo : Na-enye gị ohere iji gbanyụọ Ọrụ Ebe ma gbanwee ntọala nzuzo nke ngwa ndị akọwapụtara. A pụkwara ịchọta nhọrọ ndị a na Ntọala -> Nzuzo .
Ọdịnaya & Nzuzo Mmachibido na-enyere gị aka Kwe Ka Mgbanwe na ọtụtụ dị iche iche ihe ndị gụnyere gị passcode, olu, akaụntụ, TV na-eweta, ndabere ngwa-eme (Background App Refresh), cellular data ntọala, na adịghị nsogbu mgbe ụgbọala ntọala.
Enwere m ike ịgbanwe mmachi mgbe ha edozichara?
Ee, ịnwere ike ịgbanyụọ Mmetụta na Mmachibido Nzuzo n'oge ọ bụla! Mana nke a bụ njide - iji gbanyụọ ha, ị ga-ama koodu passcode Oge. Wayzọ a, nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwanyị enweghị ike ịgbanyụ ntọala Nzuzo & Mmachibido ọdịnaya ozugbo ịtọchara ha!
Iji gbanyụọ Mmetụta na Mmachibido Nzuzo, mepee Ntọala wee pịa Oge Ihuenyo . Mgbe ahụ, pịa Ọdịnaya & Amachibidoro Nzuzo na-abanye na gị na ihuenyo Time passcode. Na mmechi, gbanyụọ ngbanwe dị n'elu ihuenyo ahụ n'aka nri nke Mmachibido Afọ & Nzuzo. Ga-ama na ọ gbanyụrụ mgbe mgba ọkụ na-acha ọcha.
Ugbu a na ịmara Mmachibido adịghị efu, ị nwere ike ịga n'ihu nyocha na ịchịkwa ihe ndị mmadụ nwere ike na enweghị ike ịme na iPhone gị! Enwere m olileanya na ị ga-ekerịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta mgbe ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị kwenyere na Mmachibido na-efu na iPhone ha. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iPhone gị ma ọ bụ iOS 12, nweere onwe gị ịhapụ okwu n'okpuru!